စတူဒီယို ရောင်းရန်နှင့်ငှားရန် အပေါ် Realtyww Info
စတူဒီယို in Sherborne
စတူဒီယို in Dorset
စတူဒီယို in London
စတူဒီယို in Ipswich
စတူဒီယို in Suffolk
စတူဒီယို in Durham
စတူဒီယို in Reading
စတူဒီယို in Berkshire
စတူဒီယို in Salford
စတူဒီယို in Greater Manchester
စတူဒီယို in Dudley
စတူဒီယို in West Midlands
1 - 10 ၏ 13335 စာရင်းများ
Studio For Sale In Sherborne, Dorset
Discoveracollection of 24 luxurious one and two bedroom apartments, perfectly situated within the beautiful, historic market town of Sherborne.As you approach Cedar Park you are greeted by an attractive wood clad exterior, perfectly fitting with the beauty of its rural surroundings. This exclusive...
Sherborne in Dorset, Dt9 4ft
ထုတ်ဝေသည် Symonds Sampson - Sherborne
မြင်ကွင်း စတူဒီယို ထုတ်ဝေခဲ့သည် 1 day ago
Property Reference: 749926.Hampstead Studio Flat -alarge studio flat. Suits single or couple. Fully furnished, bathroom with bath tub /shower, tv, digital entry phone system, Laundry room, cctv in building.2minutes walk to Finchley Road underground station (zone 2). 1 minute walk to O2 centre wi...
ငှားရန်| 1 ရေချိုး
Austwick berry are pleased to offer this spacious 1st floor studio apartment in the well sought after area of grange farm. The property is in close vicinity to local amenities, BT headquarters and Suffolk constabulary with easy access to A12 and A14. Internally there is Lounge/ Bedroom area with pul...
ငှားရန်|2ရေချိုး
Ipswich in Suffolk, Ip5 2bb
ထုတ်ဝေသည် Austwick Berry Estate Agents Ltd
Studio To Rent In Teeside, Durham
We are pleased to bring to the rental market this ground floor studio flat which briefly comprises lounge/bedroom seperate kitchen, shower room and separate wc with wash hand basin.Bond and references requiredDSS Welcome
Teeside in Durham, Ts18 1hd
ထုတ်ဝေသည် Stockton Flats
Parkers: ** video tour available ** available now * studio apartment * ground floor * town centre location * easy access to mainline station * furnished * managed by parkers *A well presented and furnished studio apartment located within Reading Town Centre and providing easy access to the mainline ...
Reading in Berkshire, Rg1 7sy
ထုတ်ဝေသည် Parkers Estate Agents
DescriptionVideo tour available! Brand new apartments in Manchester City Centre. Immediate move in**Affinity Living Riverside offersatotally different way of living. Listening to what tenants want, they've delivered an apartment building that is centred around you.Bright spacious apartments. Stunn...
ထုတ်ဝေသည် Npp Residential
Located within one of South Croydon's more popular roads, this large studio apartment is ideal for anyone who wants their own garden while also enjoying plenty of interior space.The interior consists ofastudio room,akitchen,abathroom and an entrance hall.South Croydon Train Station and Purley ...
Croydon (london Borough) in London, Cr2 6ja
ထုတ်ဝေသည် Bond And Sherwill
DescriptionHeating and water bills included *heating and water bills included *heating and water bills includedGT Properties are delighted to offer this studio flat with separate kitchen and shower room. The property includes all bills apart from the electric. There is secure parking to the rear of ...
Dudley in West Midlands, Dy1 2dh
ထုတ်ဝေသည် G T Properties
Nicholas Estates rentals department are delighted to offer this spacious studio apartment for rent in East Ipswich.Call now to arrange your viewing
Ipswich in Suffolk, Ip4 5aq
ထုတ်ဝေသည် Nicholas Estates
Property Reference: 800969.We are proud to offer this delightful studio flat inagreat location.Available to move in from 04 June 2020. Property is offered furnished.Viewing highly recommended. Contact OpenRent today for more details or to arrangeaviewing!SummaryRent £1,325.00 per month (£305.77 ...
South London in London, Sw3 3ee
စတူဒီယိုတိုက်ခန်း - အသေးငယ်ဆုံးပါ ၀ င်သောတိုက်ခန်းများကိုစတူဒီယို၊ အမေရိကန်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်း၊ လူပျိုကြီးများတိုက်ခန်းများသို့မဟုတ်ယူကေရှိစတူဒီယိုခန်းမများဟုခေါ်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့တွင် single ည့်ခန်း၊ ထမင်းစားခန်းနှင့်အိပ်ခန်းတို့ပါဝင်သည့်အဓိကအခန်းကြီးများပါဝင်ပြီးများသောအားဖြင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့်သီးခြားသေးငယ်သည့်ရေချိုးခန်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ Bedsit သည်အင်္ဂလန်တစ်လုံးတည်းအခန်းတစ်ခန်းတည်းခိုရန်နေရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းတွင်အခြားအိပ်ရာများနှင့်အတူရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများပါဝင်သည်။ ကိုရီးယားတွင်အခန်းတစ်ခန်း (ဝင်းခန်း) ဟူသောဝေါဟာရသည်စတူဒီယိုခန်းတစ်ခုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဤအရာမှရွေ့လျားနေသည့်အခန်းများမှာအိပ်ခန်းတစ်ခန်းပါသောတိုက်ခန်းများဖြစ်ပြီး၊ အိပ်ခန်းတစ်ခန်းသည်အခြားကျန်တိုက်ခန်းများနှင့်ကွဲပြားသည်။ နောက်မှအိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါ ၀ င်သောအိပ်ခန်းသုံးခန်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ။ တိုက်ခန်းသေးသေးတွေဟာဝင်ပေါက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ကြီးမားသောတိုက်ခန်းများသည်မကြာခဏဝင်ပေါက်နှစ်ခုရှိနိုင်သည်။ ရှေ့တံခါးနှင့်နောက်ဘက်နောက်တံခါးတစ်ခု၊ မြေအောက်သို့မဟုတ်အခြားတွဲထားသောကားရပ်နားရန်နေရာများရှိသည်။ အဆောက်အ ဦး ဒီဇိုင်းပေါ် မူတည်၍ ဝင်ပေါက်တံခါးများသည်အပြင်ဘက်သို့တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်စင်္ကြံသို့မဟုတ် lob ည့်ခန်းကဲ့သို့သောဘုံtoရိယာနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။